Sida loo hagaajin qaybaha xun ee drive adag
> Resource > Utility > Sida loo dayactir Waaxaha xun ee Hard Drive
Waa maxay qaybta xun?
Drive A adag ku jira malaayiin qaybaha. Marka qaybta la burburay, xogta ku yaal aan la akhrisan kartaa oo aadan awoodin in aad ku qortaa on. Sida in qaybaha u xun, waxaa jira laba nooc, mid waa jidh ahaan u xun iyo mid waa macquul xun. Haddii jir ahaan u xun, waa unrepairable haddii aad bedesho disk cusub. Haddii kale, ma lagu kabi karaa, oo waxaa jira laba siyaabood oo loo hagaajin qaybaha xun in ay yihiin macquul burburay.
2 siyaabaha lagu dhiso qaybaha xun ee drive adag
Qaybaha xun keeni kara khasaare xogta ku wadid aad u adag. Sidaas darteed, in aadan ayaa xoojiyaa xogta ku qoran qaybta ka hor inta aadan qaadan hagaajinta talaabooyinka la sameeyo, iyo joojin your computer in ay sii wadaan qoraal ku yaal.
Way1. Dayactir qaybaha xun Windows dhisay-in qalab
1. Tag "My Computer", iyo dooran disk aad rabto in la dayactiro. Haddii aanad garanaynin kuwaas oo mid ka mid ah, waxaad iyaga ka qaban karta oo dhan mid mid.
2. Xaqa guji disk ah, iyo dooran "Guryaha". Markaas tagaan "Tools" tab.
3. Under the-jeegga qalad, ku dhacay "hadda hubi".
4. Calaamadee "Sawirka iyo isku dayo dib u soo kabashada ee qaybaha xun" oo guji "Start".
Waxaa guud ahaan uu baaritaanku iyo dayactirka qaybaha xun isku mar. Marka u dhammeeyey, qaybaha xun yihiin cusboonaysiiyey. By jidkii, haddii aad rabto si uu u xaliyo baadi nidaamka file waqti isku mid ah, waxa kale oo aad eegi kartaa ikhtiyaarka. Waxaa laga yaabaa xaalad in aad xusuusisaa waxaa lama hagaajin karo, maxaa yeelay, disk waxaa haatan la isticmaalayo. Sida caadiga ah waa disk C: halkaas oo nidaamka hawl gal lagu rakibay. Markaas waxaad dooran kartaa in lagu dhiso si toos ah marka aad bilowdo in aad mar computer soo socda.
Way2. U dayactir qaybaha xun oo lala yeesho qaybaha xun software dayactirka
Oo hadlaya Guud, qaybaha xun ayaa loo hagaajin karaa in xal kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale mar walba dhacda in qaybaha xun mar kale soo muuqan marka aad isticmaasho computer waqtiga soo socda, oo ay tahay in aad mar kale u xaliyo. Haddii aad la kulanto, waxa aad dooran kartaa in aad isticmaasho xirfad software xun dayactirka qaybta inaan ku saxno gebi ahaanba hal mar. Wondershare Liveboot 2012 waxay noqon kartaa mid fiican doorasho. Its CD Downlaods bixisaa bay'ad Gaarna nadiif ah, oo ka dhigaysa in aad hagaajin qaybaha xun ee drive adag gebi ahaanba la mid click. Haddii aad computer sida caadiga ah uma kabaha karo, tani waxay noqon kartaa xulasho wanaagsan.
Waxaad ka heli kartaa LiveBoot CD ama USB halkan.
1. Geli LiveBoot CD / USB ama furaysto ee USB LiveBoot si aad u computer, oo ka LiveBoot kabaha your computer.
2. Ka dib markii ay soo galaan nidaamka, LiveBoot si toos ah bilaabi doonaa. Dooro "Windows Recovery", oo ku dhacay "Xalka Boot Shil".
3. In qayb ka mid ah "Xalka", ka heli "Habka 2", kaas oo kuu ogolaanaya in aad ordi Check Disk ah si ay u cusboonaysiiyaan qaybaha xun.
Whent ee jeegga iyo dayactirka dhamaystirtay, computerka aad, oo ma waxaad u baahan doontaa si uu u xaliyo mar mar dambe aad isticmaali your computer.
Waxaa intaa dheer, Wondershare LiveBoot 2012 sidoo kale kaa caawin karaan in ay kabaha aad PC marka la burburtay ama si xun u burburay, sida shaashadda madow, screen buluug ah, ama lagu keydsho, iwm
Barzakh, Linux digsi iyo Qaabka
Waa Maxay Solaris iyo Talaabooyinka la Sameeyo Disk formatting on Solaris
Sida loo dayactir Operating System Loading Error
Sida loo View History on Internet Explorer
Sida loo dayactir Khaladaadka Awt.dll tayo leh